Intsebenzo eNtsha eNkulu yoThengiso lweMpembelelo- kunye neMizekelo | Martech Zone
Intsebenzo eNtsha eNkulu yokuThengisa okuPhembelelayo- enemizekelo
NgoLwesibini, Matshi 10, 2015 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UJeff Foster
Ndifanele ndiqale ngokuthi ungaphuthelwa Douglas KarrIntetho kwintengiso yempembelelo kwiNtengiso yeNtlalontle yeHlabathi!
Yintoni intengiso yeFluencer?
Ngokusisiseko, oko kuthetha ukukholisa abantu abanempembelelo, iibhlog okanye abantu abadumileyo abanokulandela okukhulu ukukhulisa uphawu lwakho kwiiakhawunti zabo ezikwi-intanethi. Ngokufanelekileyo baya kuyenza simahla, kodwa inyani kukuba uhlawule ukuze udlale. Le yimarike ekhulayo kwaye imbuyekezo inokubonisa uphawu lwakho kwimpumelelo enkulu xa yenziwe yenziwe ngokuchanekileyo.
Ndiyazi ukuba oku kungavakala kancinci umva wedijithali kodwa akukho nto intsha okanye ityhafileyo malunga nale ndlela yentengiso, okanye njengoko thina kumzi-mveliso sithanda ukubiza ukufikelela. Kwixesha elidlulileyo ubuya kuva nje, UNike uxhasa uMichael Jordan or URoger Federer wenza izigidi ezingama-71 ngonyaka kubaxhasi. Njengoko ixesha lihamba kwiinkampani ziye zaba noburhalarhume, UNadal uhlawule i-525,000 yeedola ukunxiba iwotshi kwindawo evulekileyo yesiFrentshi or UTiffany & Co ubhatala u-Anne Hathaway $ 750,000 kwii-Oscars. Namhlanje, ezi nkampani zingene tyaba ngaphandle iimali zokubhida ukuhlawula abantu ukuba bathengise iimveliso zabo (masizibize ngokuba ziyintoni) kunye neenkwenkwezi ezinjengoJennifer Lawrence.
Kodwa kuthekani ngomhlaba wonke? Ngaba bakho abanye abantu abanempembelelo abanokuthi bahlawule imali ukukhuthaza iimveliso zabo? Ngaba abantu bebhlog okanye banamaakhawunti eendaba ezentlalo banokufikelela okwaneleyo kwintengiso kunokubangela i-buzz yemidiya yoluntu?
Ewe. Kwaye lonke ishishini liyenziwa ngale ndlela yentengiso, ikhowudi enegama ukuthengisa okunempembelelo. Iinkampani ze-Fortune 500 ziyibiza intengiso yemveli, Iinkampani zokuthengisa umxholo ziyibiza ezentengiso kwaye kakhulu edume I-Blogger okanye i-Influencer Outreach. Oku akufuneki kubhidaniswe iividiyo ezixhasiweyo okanye “iiTweets ezixhasiweyoOkanye izithuba ze-Facebook ezinyuselweyo. Ezi zixhobo ezakhiwe ngokuthe ngqo kumaqonga eendaba ezentlalo anje nge-Twitter kunye ne-Facebook.
Yabona, ezi ndawo zamandla eendaba zosasazo zasekuhlaleni aziyiyo le nto bebeziyiyo. Nje ukuba ibe yindawo yosapho kunye nabahlobo yokwabelana ngemifanekiso kunye nokuhlala unxibelelana, ngoku ibe yindawo yentengiso egcobileyo elungele ukujolisa abaphulaphuli ngokuchaneka okungakholekiyo. Ezi ziqonga ezifanayo zisetyenziselwa ukuhambisa ulwazi kuzo zonke iintlobo zebhlog, ubuntu, kunye nabantu abakhuthaza iimveliso kwihlabathi liphela. Kodwa ayisiwo wonke umxholo owenziweyo olinganayo. Ngeempembelelo ezikhoyo apho zifikelela kwizigidi zabantu ngaphakathi kwenani labantu, umdlalo utshintshile kubathengisi.
Yibize ngokuthanda kwakho, umgca ongwevu phakathi kweempawu ezenza umxholo kunye neempawu ezenza iintengiso ezenzelwe ukujongeka ngathi ziqulathwe kwakudala. Namhlanje, ixhaphake kangangokuba i I-FTC ihlaziye izikhokelo zazo kwizivumelwano kwi2009 kunye izikhokelo kwintengiso yedijithali uyithande okanye uyithiye, kusemthethweni, iimveliso ziyayenza, kwaye abadali bemixholo bayayifumana kuyo, ixesha elikhulu.
Ke, unokuluxhamla njani uphawu lwakho kwintengiso yefuthe? Ngaba uyazi ukuba lilungile ishishini? Makhe sihlolisise eminye imizekelo, isoftware kunye neendlela ezinokuqalisa ngesantya sentengiso yedijithali!
Imizekelo yokuthengisa enefuthe
Kuxhomekeke kubhajethi lwakho unokukwazi mpe mbelelo udumo, indawo yemithombo yeendaba, ibhlog okanye umntu odumileyo kuFacebook. Makhe sihlolisise eminye imizekelo yoku ukuze uqonde ngcono ukuba intengiso isebenza njani.
Youtubers -Thatha iPixiwoo, ngoodade abanabalandeli abazizigidi eziyi-1.7 abanomdla kwimake-up. Ukuqhuba imagazini yokwenziwa kwidijithali yasimahla kwaye bazibeke ngokwabo kwibhlog yabo, isiteshi seYouTube, kunye nokusingathwa kwemithombo yeendaba zentlalo njengeengcali ekwenzeni. Qaphela ifayile ye- SISEBENZA NATHI: Imibuzo ngezoshishino… malunga nam icandelo lephepha.
Twilley -I-Pinterest yenye yezona ntengiso zinempembelelo kwiwebhu. Zininzi IPinPro njengoko ndithanda ukubabiza, banezigidi zabalandeli kunye nefuthe elinamandla kwindlela yokuthenga ngaphakathi koluntu. Ngena UKate Arends, iPinPro enabalandeli abazizigidi ezi-2.6 nefuthe elikhulu kudidi lobuhle nefashoni. UKate ubaleka a Ibhodi yeemveliso kwiPinterest yakhe nganye enekhonkco lokuba ungayithenga phi na loo nto.
Twitter -I-Twitter ngumhlaba othintelwa ziimpawu ezili-140, kodwa oku akukhange kuthintele amawaka amagunya anamandla kwezentlalo ekufikeleleni kwizigidi zabathengi kwiimveliso zabo. Thatha umzekelo @SABCiindaba -UMmeli weBrand yeHlabathi yeZipkick- usetyenziso lokubhukisha uhambo. Ngabalandeli abangaphezu kwesiqingatha sesigidi, ungabona ukuba kutheni kulunge kakhulu kwi-Zipkick!
Facebook Phantse nayiphi na impembelelo kuyo nayiphi na inethiwekhi ine-Facebook. I-Facebook ayingowona mthombo uphambili wempembelelo yabathengi, kodwa ngokuqinisekileyo sisongezo esomeleleyo kwiarhente yempembelelo. Ukuba uza kuhlawulela i-influencer baya kuthumela umxholo kuwo onke amajelo, kubandakanya no-Facebook. Ngoluhlu olubanzi lohlobo lomxholo, eli qonga sisixhobo esikhulu semiyalezo. Omnye umzekelo woku ungabonwa nguSydney Leroux, umdlali webhola ekhatywayo owafumana imbasa yegolide.
Vine -Iviner edumileyo (306K) UMegan Cignoli isebenza kwiimveliso ezimbalwa kwiVini, kubandakanya ukuphuhlisa le Vine vidiyo yeWarner's Bras. Ngoku ka IAdAge, Baqala iphulo labo #elokuthuthuzelwa ngabalandeli abangama-zero kwaye baphela ngokusondela kuma-5,000. Zonke iintshukumo zentlalo zikufutshane nokuthanda okungama-500,000, amagqabantshintshi kunye nokuhlaziya, ukufikelela kwisigidi se-9.8.
blog Ngaba ukhe wabuza Douglas Karr malunga nalo Martech Zone's impembelelo? Ibe yindawo ekuyiwa kuyo kwiwebhu kubathengisi abaphanda okanye abathatha isigqibo kwisigqibo sabo sokuthenga seqonga elilandelayo. Martech Zone unearhente ekhulayo ngasemva kwayo, DK New Media, Abanceda iimveliso ezinkulu kunye neenkampani zetekhnoloji yokuthengisa ukuba zikhule isabelo sabo sentengiso. Bakwabonisana nabatyali mali kumathuba otyalo-mali, kuphando lokhuphiswano, njl. Kwiphepha lesibhengezo, uDoug unika iinkcukacha kwiwebhusayithi yakhe nakwezentlalo kwaye unikezela ngendlela elula yokufumana uphawu.
Instagram: @Sopes Kukude nomphembeleli ophezulu kwi-Instagram, kodwa usachukumisa i-250K elandelayo enomdla. Ngezo ntlobo zamanani uphawu lwentengiso lunokwaziwa kwaye luxhamle kwiphulo eliyimpumelelo. I- @ Swopes ineqela elincinci, elinomdla ngakumbi eliqela lilandelayo ke le ntengiso yi Moet & Chandon ibekwe kakuhle kwaye yafumana phantse i-7.5K yokuthandwa.
Ubafumana phi abaPhembeleli?
Uyazi ngoku ukuba abachaphazeli balapha kwaye iimveliso ziyazisebenzisa, kodwa uyazi ukuba njani? Masithi nje kukho indlela elula kwaye inzima. Indlela enzima yindlela yokuqala esetyenzisiweyo kwishishini, kuphando. Oku kuhlala kuthetha ukufumana iiyure ezinde, ukunxibelelana, ukukholisa, ukwenza uthethathethwano, ukuthintela umxholo, ukumilisela, ukulandela umkhondo kunye nokulinganisa. Oku kunokuba nzima kwaye kuhlala kuthatha abantu abasebenza ixesha elipheleleyo ukufezekisa. Buza nayiphi na i-PR, i-SEO, intlalontle okanye enye iarhente yentengiso yedijithali kwaye baya kukuxelela ukuba ulisebenzisa ixesha elingakanani olu hlobo lokuthengisa.
Emuva kwiminyaka emi-5 eyadlulayo inkampani ye-SEO endayilawulayo yayiza kunikezela umsebenzi om-1 ukuba afumane kwaye aqhakamshele iiblogger kunye nomnye ukuze axoxisane, aphathe kwaye alandelele umkhankaso… ngomthengi omnye nje! UJeff Foster, uCEO we Tomoson.
Ngaphandle konxunguphalo lokufumana kunye nokunxibelelana nabaphembeleli ngendlela efikelelekayo kwaye ngexesha elifanelekileyo, iindawo zentengiso ezinempembelelo ziqalisile ukwenza Iinkampani zakha amaqonga avumela:
Abaphembeleli ukuba babhalise kwaye babonise abalandeli babo bezentlalo kunye nokugcwala kwewebhusayithi.
Amanqaku okuthenga iintengiso ezixhasiweyo ngonqakrazo lweqhosha.
Awona maqonga aziwa njengendawo anentengiso ngala:
Tomoson -Ibhlogger kunye noluntu lweshishini
Impembelelo -Iimpembelelo zeYouTube
Tomoson ivumela iimveliso ukuba zithumele umxholo isidingo esenziwe kunye neebhlog ezifanelekileyo ezifanelekileyo zokwenza inqaku. Oku konga iintsuku zomsebenzi kwaye kunceda uphawu luphele umbhali ogqibeleleyo. Iibhlogger ezinempembelelo ziyinyani kwiminwe yebrand kwiTomoson.com nganye ineeprofayili ezibonisa ukubala kwabo babalandeli abathandekayo kunye neemarike zentengiso
Kukho isoftware phaya evumela abathengisi ukuba bafumane ngokuthe ngqo abantu abanempembelelo kwimidiya yoluntu. Ngokungafaniyo neendawo zentengiso ezingentla, iibhlog ozifumana kwezi zixhobo zesoftware azikhethi. Aba bantu banempembelelo abazibhalisanga kwaye bathi ewe ndikulungele ukwenza iposi exhaswa ngemali”Ngee- $ 500. Endaweni yokuba isoftware ikhase kwiwebhu, ikhangela ukulandelwa okuphezulu kunye nokugcwala okuphezulu kwewebhu. Nje ukuba idityaniswe, oku kuvumela ii-brand ukuba zifumane ngokulula kwaye zifikelele kwaba bashukumisayo.
On Tomoson Kulula kakhulu ukufumana kungekuphela nje iibhlog ezinempembelelo kodwa iibhlog ezifanelekileyo, zilungele ukubhala umxholo onomdla kunye nokwabelana ngemveliso yakho.
Icebo lokuThengisa elinempembelelo
Xa ucinga iqhinga, kufuneka uqale ucinge ngophawu lwakho. Ngubani ojolise kuwe kubemi, kwaye ziziphi izinto abazithandayo? Uzama ukufikelela kubani? Umama weblogger othanda ubugcisa kwaye uchitha iintsuku zakhe ecofa iPinterest? Umhambi omkhulu webhajethi obeka i-jet kukhangelo lwe-Instagram enkulu? Okanye mhlawumbi intombazana ekwishumi elivisayo efunda ukuba yeyiphi na eyona nto isebenza kakuhle ngobuso bayo kwiYouTube. Konke malunga negama kunye nokujoliswa kuko. Iimpembelelo zinokuba lukhetho olunamandla kwintengiso yedijithali xa zisetyenziswe ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo, ziyakhuthaza, ziyahlekisa, okanye umxholo oluncedo uhanjiswa kwindawo ekujoliswe kuyo eyiyo.
Thatha uMarriott umzekelo, Bafumene iibhlog eziyi-8 ezinempembelelo ngoncedo lweDiamond PR, babanika iikhredithi zehotele eFlorida kwaye babayeke bonwabele oko bafuna ukukwenza ngokweminqweno yabo. Emva kokuba bonwabele ukombiwa simahla baya kwiziteshi zabo kwaye baxelela ilizwe ngamava abo amangalisayo kwindawo nganye yeFlorida Marriott.
Xa uthengisa ngamava (endaweni yemveliso) njengoMarriott, bakubone kungcono ukuvumela abo bashukumisayo ukuba babenayo simahla kwaye baxelele umhlaba ngayo. Eli yayiliqhinga elihle kunye nokuphunyezwa okumnandi kakhulu. TheOutReachMarketer inika ingxelo ngeziphumo zeli phulo ngolu hlobo:
Ukufumana iiposti zebhlog ezingama-39
Ukudibanisa iibhlog ze8 zafikelela kwi-1,043,400 iindwendwe ezizodwa zenyanga
The #BloggingFL I-hashtag ifikelele phantse kwi-8 yezigidi zokuhanjiswa kwexesha le-Twitter
Nge-Facebook nakwi-Instagram, iibhlog zafikelela phantse kubantu abangama-30,000 ngabalandeli babo
Omnye umzekelo olungileyo kuxa uWendy eyiphosile umva, enxibelelana nomama kunye nefashoni / iibhlog zesitayile ezibanika nganye isigqebhezana simahla sefriji. Injongo yayikukukhuthaza ukuba iiqabaka ngoku ziyafumaneka kwii-waffle cones. Iibhlog nganye ziye zacelwa ukuba zithumele umxholo obandakanya ukubonwa okukhoyo kunye neenkumbulo ezintle ezibuyiswe kukonwabela iqabaka likaWendy. Inqaku likaWendy likhulu kule kunye nomxholo omkhulu owabelwana kuwo onke amajelo eendaba ezentlalo.
Isitshixo sempumelelo xa usebenzisa intengiso yempembelelo kukwazi uphawu lwakho kunye nentengiso yakho ekujolise kuyo ngaphakathi. Kufuneka wazi izinto abazithandayo / abangazithandiyo, izinto abazithandayo kunye nezinto abanomdla kuzo. Iimpembelelo zedijithali zizikhulisi zentengiso. Eyona nto ibaluleke kakhulu ngokwe-ROI kunye nokufikelela komyalezo ngumgangatho womxholo, kunye nolwalathiso lwentengiso. Ukuba ubonelela ngesiqulatho ESIKHULU kwaye uyijolise kwi-bullseye uqinisekile ukuba uyikhuphe ngaphandle epakini.
tags: ubalekilekublogaFacebookukuthengisa okunempembeleloIimpembelelo zokuthengisaizixhobo zentengiso ezinefutheAbathinteliifutheinstagramizeaumtshatoUkomelela kwamadodamichael jordannadalnichenikeiphepheni ebomvuURoger FedererukuvelaUmthengisi wokufikelela ebantwiniImvelaphi yegama lokuqala Tiffany.ngomsoTwitterumdiliya
Yintoni uGunyaziwe woMxholo?
IShift yokuThengwa kwi-Intanethi nabaThengisi
Mar 10, 2015 ngo 8:15 PM
Ndiyamthanda uTomoson! Ndizisebenzisa ngalo lonke ixesha ukufumana iimveliso ezintle zokuphononongwa ngabalandeli bam kwaye ibe ngamava amnandi. Ndisandula ukugqiba uphononongo lwam lwe-29th lwabo.
Mar 10, 2015 ngo 8:56 PM
Ndingumphembeleli kuTomoson kwaye baye baba mnandi kakhulu ekusebenzeni nabo. Ndenze uninzi lokujonga ngokunyaniseka kubo kwaye andikhalazi. Iinkampani ezisebenza noTomoson ziye zamnandi ukusebenza nazo.
Mar 20, 2015 ngo 1:46 PM
Inqaku elihle-ndidlale ngokujikeleza ngamanye amaqonga akhankanyiweyo kwiposti kunye neGrouphigh (kulungile ukufumana iiblogi ezinempembelelo). Iingcinga ngeendlela ezilungileyo zokufumana abachaphazeli kumaqonga anjengeSpapchat okanye iTumblr?